Ny vidinay dia azo ovaina arakaraka ny famatsiana sy ny anton-javatra hafa amin'ny tsena. Manomeza anay antsipiriany araka izay azo atao, ao anatin'izany ny Gram, Width, Color, ny halavan'ny horonan-taratasy / Quantity Totall, ny fampiasana ary raha misy fepetra takiana manokana amin'ny endri-javatra ohatra ny fanoherana UV , tantera-drano sns.
Mampanantena izahay fa hanome anao ny vidin'ny orinasa misy kalitao avo lenta.
Eny, takianay ny kaomandy iraisam-pirenena rehetra mba hanana fatra farafahakeliny farafahakeliny. Raha mitady hamidy indray ianao nefa amin'ny habetsaky ny kely dia kely, mamporisika anao izahay hijery ny tranokalanay.
Ho an'ny santionany, ny mitarika fotoana dia tokony ho 2-3 andro. Ho an'ny famokarana betsaka, ny fotoana itarihana dia 7-15 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola.
Azonao atao ny mandoa ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky anay, DP, LC, Alibaba.
Ahoana no fomba ahazoako santionany hijerena ny kalitao?
Afaka mandamina santionany aminao izahay hanamarinana ny kalitaon'ny vokatray. Maimaimpoana ny santionany, saingy mila mandoa ny sarany mazava ianao
Vidin'ny lamba lamba, Lamba tsy misy tenona polypropylene Spunbond, Fitaovana tsy tenona, Lamba tsy tenona, Lamba tsy vita tenona Polypropylene, Pp lamba tsy tenona,